ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် IBC သင်ခန်းစာ & စီးပွားရေးအသုံးပြုမှု
Offshore Company သည်ကော်ပိုရေးရှင်း၊ LLC သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအလားတူအဖွဲ့အစည်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံပြင်ပတွင်သာလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်“ Offshore Company” ဟူသောဝေါဟာရကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်လူတစ် ဦး အားကူညီရန်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့ဟူသောဝေါဟာရကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ် ကမ်းလွန်။ ကမ်းလွန်တွင်တည်ရှိသည်သို့မဟုတ်လူတစ်ဦး၏အမျိုးသားရေးနယ်နိမိတ်ကျော်လွန်တည်ရှိပြီးဆိုလိုသည်။ ဝေါဟာရ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ ၎င်း၏ရှုထောင့်ပေါ်မူတည်။ နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ၏အကြီးအကဲများ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ကျောင်းအုပ်များနေထိုင်သည့်နိုင်ငံပြင်ပသို့တင်သွင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မိတ်ဖက်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောနိုင်ငံအတွင်းမှ၎င်းသည်မူလတရားစွဲဆိုထားသည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပတွင်လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်တ ဦး တည်းထိုကဲ့သို့သော entity ဖွဲ့စည်းမယ်လို့? နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်တွင်မရရှိနိုင်သည့်ဥပဒေများကိုအခွင့်ကောင်းယူလေ့ရှိသည်။ ဤအကျိုးခံစားခွင့်များ၏ဥပမာများမှာအခွန်ငွေစုဆောင်းခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချလိုသည်။
ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့တိုင်းပြည်ကဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုကမ်းလှမ်းမှာလဲ။ ဒါဟာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှဝင်ငွေဆောင်ကြဉ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းသည့်ကိုယ်စားလှယ်များအားအခကြေးငွေများနှင့်အခကြေးငွေများပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Nevis၊ BVI, Belize နှင့် Cook Islands ကဲ့သို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည်သဘာ ၀ သယံဇာတများကိုနည်းပါးစေသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာထူးခြားတဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဥပဒေတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဤဥပဒေများကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအရင်းအနှီးများထားရှိခြင်းကိုဆွဲဆောင်စေသည်။
သရုပ်ဖော်ပုံနှင့်အမျှနေးဗစ်၏ကာရစ်ဘီယံကျွန်းအတွင်းတင်သွင်းထားတဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနိုင်ငံသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဘဏ်အကောင့်ကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်နေးဗစ်၏တိုင်းပြည်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု operate လို့မရပါဘူး။ နေးဗစ် LLC ဥပဒေရေးရာအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုတရားစွဲမှုနှင့်အကြွေးများကဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းထံမှကုမ္ပဏီအတွင်း၌ကျင်းပသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ကြွေးရှင်ကာကွယ်မှုအပေါ်သုတသေနပွုသောသူတို့မူကား entity ဖွဲ့စည်းရန်ဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်နေးဗစ်ကို ရွေးချယ်. လိမ့်မည်။
တဦးတည်းအခွန်-ငွေစုဥပမာ Apple က, Inc, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Cupertino, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Apple ကအိုင်ယာလန်အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အိုငျးရစျကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီမကိုမ အိုင်းရစ်ကော်ပိုရေးရှင်း ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်, လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအိုင်ယာလန်အတွက်မဆိုဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ကြပြီသောအဓိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်နေသောအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပေါင်းသင်းရမည်ဆိုပါစို့။ ဤနိုင်ငံသည်အိုင်ယာလန်ကုမ္ပဏီအချို့အားနေထိုင်ခွင့်မရှိသောအခြေအနေကိုတောင်းဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Apple ၏အဓိကကုမ္ပဏီကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအခွန်မပေးဆောင်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုမည်သည့်နေရာတွင်တင်သွင်းသည်ကိုအမေရိကန်ဥပဒေကမေးသည် (IRC Sec ။ 7701 (a) (5)) ။ အိုင်ယာလန်ဥပဒေကကုမ္ပဏီတစ်ခုအားမည်သည့်နေရာတွင်စီမံခန့်ခွဲသည်ကိုမေးသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေမှမဆိုကုမ္ပဏီအားနေထိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်အခွန်ဆိုင်ရာစာချုပ်များလည်းပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်နှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့အကြားအခွန်စာချုပ်သည် Apple ၏နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်သောလက်အောက်ခံများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။
စကားမစပ်ပြောရရင်ဥရောပသမဂ္ဂကဒီအားနည်းချက်ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အခွန်တွေကောက်ခံဖို့ Apple ကိုတရားစွဲခဲ့တယ်။ အက်ပဲလ်က၎င်း၏အယူခံကိုကုန်ဆုံးပြီးနောက်မည်သည့်ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အီးယူနှင့်အိုင်ယာလန်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုခွင့်မပြုတော့သည့်ဥပဒေများကိုပြဌာန်းခဲ့သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပြည်တွင်း၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောနိုင်ငံမှလည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ထောင်ထားသောသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းထားသောကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်များသောအားဖြင့်ပိုင်ရှင်များသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံတွင်ပင်တည်ရှိသည်။ ၄ င်းသည်၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် UBS Bank သည် UBS Group AG ၏ဆွစ်ဇူးရစ်ရှ်ကွန်းတန်တွင်တင်သွင်းသည်။ အဲဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ ၎င်း၏ရှေ့နေများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပြင်ပရှိဘဏ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်၎င်းကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
ပြည်တွင်းတဦးတည်းဆင်တူအနေနဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ, ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု operate, စာဖြင့်ရေးသားသဘောတူညီချက်များထဲသို့မဝင်ရ, ဝယ်ရောင်းများနှင့်စီးပွားကူးသန်း၏အခြားပုံစံများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC သို့မဟုတ်ကမ်းလွန် IBC) အဖြစ်လူသိများကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးရှိရာနိုင်ငံတွင်အခွန်တာဝန်ဝတ္တရားမရှိပါ။ ဒါဟာဖွဲ့စည်းခြင်း၎င်း၏တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများဖြစ်နိုင်ပြီးဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီများ”၊ အကန့်အသတ်ရှိသောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ (သို့) အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ဘီလီဇ်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောကုမ္ပဏီများ (LDCs) ဟုခေါ်သော LLCs များနှင့်ဆင်တူသည်။ LDC များတွင်သက်တမ်း ၅၀ ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်တင်သွင်းနိုင်သည်။
ကမ်းလွန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာတရားစီရင်မှု၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ဤတည်နေရာနေးဗစ်, ဘေလီဇ်, ကွတ်ခ်ကျွန်းစု BVI, ဆေးရှဲ, ပနားမားနှင့်အန်ဂွီလားပါဝင်သည်။ file မှဘယ်မှာ ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏စျေးနှုန်း, အမြန်နှုန်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဂုဏ်သတင်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ, နေးဗစ် LLC အမေရိကန်လူတစ်ဦးအဘို့အတော်လေးအကျိုးရှိဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ဤသည် entity သာလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အခွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်ပုံရသည်။ တစ်နာဗိစ် LLC ၏အတွင်းပိုင်းကျင်းပပိုင်ဆိုင်မှုများအကြွေးထဲကနေကာကှယျနိုင်ပါသည်။ Plus အား, နေးဗစ်အတွက် LLC ကြောင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်အခွန်များပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ လက်ျာပုံစံများကိုတင်သွင်းနေကြသည်သောအခါ, ရိုးရိုးပိုင်ရှင်စီးဆင်းမှု-မှတဆင့် entity အခွန်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ကုမ္ပဏီအဆင့်မှာမဆိုင်ငွေအခွန်မပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။
A ဘေလီဇ် LDC ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်-ပါလိမ့်မယ်တရားထံမှဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုရဖို့ရန်သည်အခြားတတ်နိုင်နည်းလမ်းများပေးထားပါတယ်။ ဘေလီဇ်ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အွန်လိုင်းအသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူမျှမျှတတကြံ့ခိုင်ဘဏ်စနစ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ကွတ်ကျွန်းစု LLC နေးဗစ်၏နီးပါးတူညီဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ Plus အားပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပြဌာန်းချက်ကတခြားတရားစီရင်မှု၏ထက်သာလွန်ဖြစ်ကြသည်။ ကွတ်ကျွန်းစုဟာဝိုင်ယီအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းဇုန်အတွက်တောင်ပစိဖိတ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာကနေလွတ်လပ်သောအလွန်တည်ငြိမ်အစိုးရ, ရှိပါတယ်, သေးနယူးဇီလန်နှင့်ဆက်နွယ်။
ကမ်းလွန် vs. ကမ်းလွန်
ပုံမှန်ကမ်းလွန်ပိုင်နက်ထဲမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမတူဘဲ, တဦးတည်းကမ်းလွန်ပိုင်ရှင်သည်တည်နေရာတစ်ခုအတွက်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်အခွန်အားသာချက်များများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမေရိကန်တစ်ဦးနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်သူဟောင်ကောင်, ဗြိတိန်, ကနေဒါသို့မဟုတ်မက္ကစီကိုတစ်ဦးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ပါတယ်။ UK ရှိတစ်ဦးကလူတစ်ဦးဖလော်ရီဒါ, ဝဲသို့မဟုတ် Wyoming ၏အမေရိကန်ပြည်နယ်ထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနေထိုင်သူအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးက Wyoming LLC ဥပမာ, ယူအက်စ်အေပြင်ပတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးအမြတ်အစွန်းအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ရမထားဘူး။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသုတေသနခရီးစဉ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလုပ်ဆောင်သွားရန် ပင်မစာမျက်နှာ။ ဒီစာမျက်နှာကနေဆောင်းပါးတွေဖို့ links ခေါင်းစဉ်ကအမြိုးအစားနေကြသည်။